Kusukela ngesikhathi sokuzamazama komhlaba eSichuan, bengihlala ngokwesaba futhi ngikhathazekile ukuthi kungenzeka ngelinye ilanga ngehlakalelwe inhlekelele. Ikakhulukazi njengoba kade ngizibonile izinhlekelele zenyukela, futhi nokuzamazama komhlaba sekwenzeka njalo, ukwesaba kwami ukubhujiswa okuzayo sekuphinyiselwa kakhulu. Ngenxa yalokho, ngichitha izinsuku zonke ngicabanga ngezinyathelo zokuphepha okumele ngizithathe ukuzivikela ekushayweni ukuzamazama komhlaba.
Ngolunye usuku, ngesikhathi sesidlo sasemini, udadewabo wophethe umndeni engangihlala nawo wavula umabonakude njengenjwayelo, kwenzeka ukuthi umethuli wezindaba akhulume ngezindlela zokuphepha mayelana nokuzamazama komhlaba. Uma kuba nokuzamazama komhlaba, kumele ugijimele phandle ngokushesha endaweni evulekile ukuze ugweme ukulinyazwa izakhiwo eziwayo. Uma ungeke ukwazi ukuphuma ngesikhathi, kumele ucashe ngaphansi kombhede, kwetafula noma ekhoneni…. Emva kokuzwa lokhu, ngezwa sengathi sengithole isixazululo sokusindisa impilo, ngaze ngafaka lezi zindlela zokuphepha ekhanda, ukuze ngisindise impilo yami uma kuzamazama umhlaba. Ngabuyela egumbini lami emva kwesidlo sasemini, ngase ngibhekisisa ingaphakathi nengaphandle lendlu futhi ngaphoxeka kakhulu ngalokho engakubonayo: Kwakukhona imfucumfucu eningi ngaphansi kombhede, futhi yayingekho indawo yokucasha. Uma ngibheka ngaphandle kwendlu, ngaphakathi kwezinyathelo ezingamakhulu kusukela lapho engangimi khona, zonke izakhiwo zazinezitezi eziyisihlanu noma eziyisithupha ubude, futhi zibekwe ngokusondelana. Nakuba bengingaphuma esakhiweni sami kodwa kunamathuba amaningi okuthi ngigxobeke ngife. Kwakubukeka sengathi ukufeza umsebenzi wami lapha kwakuzoba ingozi kakhulu. Kwakuzomele ngilinde umholi wesifunda aze azongishintshela emndenini osendaweni esemakhaya. Ngaleyo ndlela, uma ukuzamazama komhlaba kungenzeka, kuyoba lula ukubalekela endaweni evulekile. Kodwa kwenzeka kimi: Umsebenzi wami wokubuyekeza izindatshana uphathelene kakhulu nokuhlala ngaphakathi endlini—nakho ukuhlala emaphandleni impilo yami isazoba sengcupheni. Ngingamane ngimtshele umholi ukuthi angidlulisele ethimbeni levangeli lomugqa wesibili. Ngaleyo ndlela ngiyoba ngaphandle usuku lonke, futhi kuyobe kuphephile kunokuhlala ekhaya. Into kuphela kwakungukuthi, ngangingazi noma kusadingeka ukuba ngilungise indawo yokuhlala isikhashana. Ngakho, ngahlala ngokwesaba zonke izinsuku, futhi angikwazanga ukugxila ekubuyekezeni izindatshana.
Kwathi ngolunye usuku, ngabona le ndima yamazwi kaNkulunkulu, “Uma inhlekelele ifika, indlala kanye nesifo esibhubhisayo siyokwehlela bonke labo abaphikisana Nami futhi bayokhala. Labo abenze zonke izinhlobonhlobo zobubi, kodwa asebengilandele iminyaka eminingi, ngeke bangabi nacala; nabo futhi, bayokwehlela enhlekeleleni efana nayo engakaze ibonakale ezinkathini zonke, futhi futhi bayohlala esimweni esingapheli sokwethuka novalo. Futhi labo abalandeli Bami abakade bethembekile Kimi ngedwabayojabula futhi bababaze amandla Ami. Bayokuzwa ukweneliseka okungachazeki ngaphakathi futhi baphile ngenjabulo engingakaze ngiyiphe isintu. … Noma kunjalo, ngethemba ukuthi uzolungisela isiphetho sakho isamba esenele sezenzo ezinhle. Ngiyobe sengeneliseka; ngaphandle kwalokho, akekho phakathi kwenu oyophunyuka enhlekeleleni ezonehlela. Inhlekelele isuka Kimi futhi ngokusobala ihlelwe Yimi. Uma ningeke nivele nibahle emehlweni Ami, ngeke niphephe ekwehlelweni yinhlekelele” (“Kumele Wenze Izenzo Ezinhle Ezanele Ukulungiselela Isiphetho Sakho” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Amazwi kaNkulunkulu angivusa. Kwacaca ukuthi, uNkulunkulu odala izinhlekelele—ziphuma kuYe. UNkulunkulu ufuna ukusebenzisa izinhlekelele ukubhubhisa lobu bubi kanye nohlanga lwesintu esonakele. Lokhu ilokho uNkulunkulu afisa ukukwenza ngezinsuku zokugcina. Abangakholwa abakwazi lokhu, futhi bacabanga ukuthi lokhu izinhlekelele zemvelo. Ngaleyo ndlela basebenzisa izindlela zabantu, amandla abantu ukuzisindisa uma bebhekene nezinhlekelele. Bacabanga ukuthi bengawugwema umonakalo wezinhlekelele ezahlukene ngokwenza lokhu. Futhi nami, engangingenalwazi, ngangikholwa kuNkulunkulu kodwa ngangingawazi nhlobo umsebenzi kaNkulunkulu. Ngangicabanga ukuthi konke engangidinga ukukwenza kwakungukulandela amanyathelo ezinyathelo zokuphepha zabangakholwa futhi ngiyophunyuka ekuhluphekeni kokushaywa izinhlekelele futhi ngisinde. Kwakungenangqondo ukuthi ngibone ngendlela efanayo nabangakholwa! Ukuba ngangazi ukuthi uma abantu bengayenzi imisebenzi yabo ngokwethembeka futhi behluleka ukwenza imisebenzi emihle, angeke babonakale emehlweni kaNkulunkulu njengabahle? Akukhathaleki ukuthi abantu bangaba namandla kangakanani, nokuthi ziphambili kanjani izinyathelo zabo zokuphepha, noma ziphelele kahle kangakanani izinhlelo zabo zokutakula, ekugcineni akukho ukuphunyuka kulezo nhlekelele ezivakashiswa uNkulunkulu phezu komuntu. Kusukela ezimpendulweni zami ezahlukene kuze kufike ekwathusweni inhlekelele, kwakunesiqiniseko sokuthi ngangingenakho ukukholwa kweqiniso kuNkulunkulu. Ngangingenakho ukuqonda kweqiniso umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kanye nobusomandla nobukhosi Bakhe. Ngangingenakho ukuqonda ukuthi uNkulunkulu ujonge ukubhubhisa ngezinhlekelele, noma ubani uNkulunkulu afisa ukumsindisa, futhi angiqaphelanga ukuthi ezinhlekeleleni, yilabo kuphela abathembekile kuNkulunkulu futhi balungisa imisebenzi emihle eyanele, yilabo abophuliwe kwinhlekelele. Ngakho-ke, ngesikhathi izinsongo zenhlekelele zesabisa, esikhundleni sokuba ngicabangisise ukuthi ingabe ngiyilungisile yini imisebenzi emihle, ngathembeka kuNkulunkulu, ngalifuna iqiniso futhi ngayamukela insindiso kaNkulunkulu, ngachitha sonke isikhathi sami ngicabanga ngezindlela engingazisindisa ngazo. Ngaphandle kweqiniso, yile ndlela thina esiphenduka sidabukise ngayo!
Ngesikhathi sikaNowa, ngesikhathi uNkulunkulu ebhubhisa umhlaba ngozamcolo, ngenxa yokuthi uNowa wayemesaba uNkulunkulu futhi wabalekela ububi, wakha umkhumbi ngokwentando kaNkulunkulu, wachitha konke ngenxa yesicelo sikaNkulunkulu, futhi wabonisa ukwethembeka kwakhe konke, wabonwa nguNkulunkulu njengolungileyo. Ngakho-ke, ngesikhathi sekufika inhlekelele, bonke abayisishiyagalombili bomndeni wakhe basinda. Ngaleso sikhathi, ngakhumbula okwakhulunywa ngakho kwi “Hlanganyela futhi Ushumayele Ngokungena Empilweni (Fellowship and Preaching About Life Entry),” “Uma ungayilungisi imisebenzi emihle, uma kufika inhlekelele, inhliziyo yakho iyethuka usuku lonke. Ngaphandle kwemisebenzi emihle, inhliziyo yomuntu ayibi nenduduzo, futhi akabi nokuzethemba noma ukuthula enhliziyweni yakhe. Ngenxa yokuthi engayilungisanga imisebenzi emihle, akukho ukuthula nenjabulu yeqiniso enhliziyweni yakhe. Abenzi bobubi banonembeza obalahlayo, futhi babi enhliziyweni. Ngesikhathi benza kakhulu imisebenzi emibi, ikakhulu bezizwa benecala futhi bazizwa besaba kakhulu. Uma kufika inhlekelele enkulu, kumele wenze okuningi okuhle futhi ulungise imisebenzi eminingi emihle ukuze inhliziyo yakho iduduzwe futhi ibe nokuthula. Kungaleso sikhathi kuphela lapho uyozwa khona ukuthula nenduduzo enhliziyweni yakho uma isishaya inhlekelele” (“Ukubaluleka Kokulungisa Imisebenzi Emihle” kwi“Izintshumayelo kanye Nokuhlanganyela Ekungeneni Ekuphileni (Sermons and Fellowship On Entry Into Life) (II))”. Ngesikhathi ngicabanga ngokuthi ngangizizwa ngingakhululekanga kangakanani futhi nginovalo usuku lonke, ngesaba ukufa kwami kwinhlekelele, ngabona ukuthi kungenxa yokuthi angikawenzi umsebenzi wami ngokwethembeka futhi ayikho imisebenzi emihle esengiyilungisile. Ekwenzeni imisebenzi yami, angikaze ngiwuthwale umthwalo ngenxa yomsebenzi engethenjwe ngawo ibandla. Angikaze ngiyifeze imisebenzi yami ngenhliziyo eyethembekile kuNkulunkulu. Kunalokho, ngakhohlisa futhi ngabhekana noNkulunkulu ngendlela yokuzitika enyameni. Angenzanga okuningi ngezindatshana engangithunyelwe ukuzenza, kodwa ngazibuyekeza ngobudlabha ukuze nje ngiqede umsebenzi wami. Ngesikhathi ngibona ukuthi izindatshana ezazibhalwe ngabafowethu nodadewethu ukuthi azihlelekanga kangakanani, angibabonisanga futhi angibasizanga ngokukhuthala, kodwa ngabhala amazwana ambalwa, ngingenandaba ukuthi bayawaqonda noma azoba lusizo na. Esikhundleni salokho, ngaziphindisela izindatshana kubo ngokuphuthuma, ngemuva kwalokho ukuthi ngathola izindatshana okumele ngizibuyekeze zincipha kancane kancane. Ngenxa yalokho umsebenzi wokubuyekezwa wonke wavele wema. Nakuba kunjalo, angibhekisisanga izenzo zami, noma ngizame ukubona futhi ngilungise umsuka wenkinga, kodwa ngasola umholi, ngathi izinkinga zavuka ngenxa yokuthi akabekanga ukubaluleka emsebenzini wokubuyekeza. Ngakube ngiqala kanjani ukwanelisa uNkulunkulu ngalezi zenzo ezinje futhi ukuze ngiduduzwe enhliziyweni? Ngale ndlela ngingabonakala kanjani emehlweni kaNkulunkulu njengomuhle? Uma ngiqhubeka endleleni futhi ngingashisekeli iqiniso ngendlela eyiyo, ngihluleke ukwethembeka kulokho engethenjwe ngakho yibandla, futhi ngingalungisi imisebenzi emihle eyanele, angeke ngempela ngikwazi ukuphunyuka olakeni lwesijeziso sikaNkulunkulu kwababi nakuba ngilandela lezo zinyathelo zokuphepha ezibekwe uSathane ngesikhathi sekwehla inhlekelele.
Okwedlule：Yini Ngempela Ukwamukela Iqiniso?
Okulandelayo：Imfundiso kasathane Iyisithiyo futhi Iyalimaza
Ngenxa Yezinhlupho Ezinkulu, Ngivune Imihlomulo Emikhulu Kubaluleke Kakhulu Ukulalela Umsebenzi KaMoya ONgcwele! Ubusha Obungenakho Ukuzisola Ukuzithukulula Emaketangeni Omoya